I Kangwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 210. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kanye dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 47 007. Ny laharam-pokontaniny dia 122. Ny laharam-pehintaniny dia -24.966746 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.332735.
I Karakobis dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 881. Ny laharam-pokontaniny dia 28. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kareng dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 259. Ny laharam-pokontaniny dia 37. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kasane dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 9 008. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia -17.816667 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.15.
I Katamaga dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland Delta any Botsoana. Ny isam-poniny dia 42. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kaudwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 084. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kauxwhi dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 040. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kavimba dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 549. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia -18.016667 ary ny laharan-jarahasiny dia 24.6.
I Kazungula dia tanàna iray ao aminny distrikani Chobe any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 133. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kedia dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 237. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Keng dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 992. Ny laharam-pokontaniny dia 20. Ny laharam-pehintaniny dia -24.599052 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.75522.
I Kgagodi dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 756. Ny laharam-pokontaniny dia 15. Ny laharam-pehintaniny dia -22.379947 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.565179.
I Kgakge / Makakung dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 279. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kgari dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 534. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kgomodiatshaba dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 418. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia -23.657115 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.103624.
I Kgomokasitwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 423. Ny laharam-pokontaniny dia 8. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kgope dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 368. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kgoro dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 711. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -25.414504 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.469961.
I Khakhea dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 944. Ny laharam-pokontaniny dia 27. Ny laharam-pehintaniny dia -24.68954 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.494031.
I Khisa dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 383. Ny laharam-pokontaniny dia 14. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Khonkhwa dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 475. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Khudumelapye dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 080. Ny laharam-pokontaniny dia 62. Ny laharam-pehintaniny dia -23.883333 ary ny laharan-jarahasiny dia 24.75.
I Khuis dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 897. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia -26.666667 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.833333.
I Khurutshe dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 130. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Khwawa dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 817. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Khwee dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 196. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kobojango dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 138. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia -21.832697 ary ny laharan-jarahasiny dia 28.728819.
I Kodibeleng dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 298. Ny laharam-pokontaniny dia 32. Ny laharam-pehintaniny dia -23.131626 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.179341.
I Kokong dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 928. Ny laharam-pokontaniny dia 26. Ny laharam-pehintaniny dia -24.344962 ary ny laharan-jarahasiny dia 23.11971.
I Kokotsha dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 224. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kolonkwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 599. Ny laharam-pokontaniny dia 13. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Komana dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 232. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kopong dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 9 312. Ny laharam-pokontaniny dia 18. Ny laharam-pehintaniny dia -24.483333 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.883333.
I Kotolaname dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 596. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -24.482232 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.263246.
I Kubung dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 881. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -24.633039 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.308704.
I Kudumatse dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 030. Ny laharam-pokontaniny dia 12. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kule dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 807. Ny laharam-pokontaniny dia 30. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kumaga dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Boteti any Botsoana. Ny isam-poniny dia 758. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kumakwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 545. Ny laharam-pokontaniny dia 7. Ny laharam-pehintaniny dia -24.65522 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.699176.
I Kutamogree dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 035. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kutuku dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 166. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Kweneng dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 570. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia -21.961276 ary ny laharan-jarahasiny dia 28.336605.
I Lefoko dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 534. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lehututu dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi North any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 956. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia -23.966667 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.866667.
I Lejwana dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 621. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lekgolobotlo dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 177. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -24.909233 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.624984.
I Lentswelemoriti dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 243. Ny laharam-pokontaniny dia 13. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Lentsweletau dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 4 916. Ny laharam-pokontaniny dia 42. Ny laharam-pehintaniny dia -24.248629 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.852146.
I Leologane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 823. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.